ဆက်လက် ဖတ်ရှုရန် »
စာရေးသူ Aung Htun Oo ရေးခဲ့ချိန် 9:56 PM No comments:
ကျွန်တော် နေခဲ့တဲ့ လားရှိုးက ကျောင်းတစ်ကျောင်း မှာ သရဲရှိတဲ့ ရေကန် တစ်ကန်ရှိတယ်ဗျ….။ ရှင်းပြရမယ်ဆို ဒီလို…။ ကျွန်တော်တို့ ကျောင်းနောက် ဘက်မှာ ရေကန်ကြီး တစ်ကန် ရှိတယ်..။ အဲ့ဒီ ရေကန်က နာမည်ကြီး။ တစ်နှစ်ကို တစ်ယောက် အနည်းဆုံး စားတယ် ဆိုပြီး နာမည်ကြီးတာ..။ အမှန် ရေကန် တစ်ကန်လုံးက တိမ် တိမ်လေး..။ ကန်စိမ်း ဆိုတဲ့ နေရာတစ်ရာလေးသာ ကွက်ပြီး နစ်နေတာ..။ သေကြတဲ့ သူတွေကလည်း အဲ့ဒီ နေရာမှာ သေကြတာပဲ။
ခက်တာက ကျွန်တော်တို့ ကလေးတွေ စိတ်ကူးပဲ..။ ရေကန်က တစ်နှစ်တစ်ယောက် လူစားတယ်ဆိုတော့ ဒီတစ်နှစ်ပတ်ထဲ ဘယ်သူမှ မသေ သေဘူးဆိုရင် ကန်စိမ်းဘက်ကို ဘယ်သူမှမသွားရဲကြဘူး..။ အဲ တစ်ယောက် သေပြီဆိုတာနဲ့ သူစားပြီးသွားပြီ ဆိုပြီး ကဲတော့တာပဲ..။ အဲနောက်ပိုင်း တစ်နှစ်ကို နှစ်ယောက်၊ သုံးယောက်၊ လေးယောက် ဖြစ်လာပြီး နောက်ဆုံး ကန်ထဲကို ရေမကူးရ ဆိုပြီး ကျောင်းက ဆရာ/ဆရာမ တွေက စည်းကမ်းတွေ ထုတ်လိုက်ရတယ်…။
မှတ်မှတ် ရရ အဲ့ဒီနှစ်က ကျွန်တော် ငါးတန်း၊ ကျွန်တော်နှင့် ကျွန်တော် သူငယ်ချင်းနှင့် နှစ်ယောက် တနင်္ဂနွေ နေ့ကျောင်းပိတ်ရက်မှာ ဘောလုံးကန်ရင်းငါးမျှားထွက်ကြတယ်…။ ကျောင်းကွင်းမှာ ဘောလုံးကန်ပြီးတော့ ကျောင်းနောက်က ကန်မှာ ငါးမျှားမယ်ပေါ့…။ ဘောလုံးလည်းကန်ပြီးရော ကျွန်တော်တို့တွေ ကန်ဘေးမှာ ထိုင် ပြီး အေးအေးလူလူ ငါးမျှားနေတယ်…။ ဘောလုံးကိုတော့ လမ်းဘေးပေါ်မှာ တင်ထားပြီး ကျွန်တော်တို့က ကန် ဘောင် ဘေးက အပင်အောက်မှာ အရိပ်ကောင်းကောင်းနဲ့ ထိုင်ပြီး ငါးမျှားနေတယ်..။ ကျွန်တော့် အထင် အချိန်က ညနေ ၃း၀၀ နာရီလောက် ရှိမယ်…။
ရုတ်တရက် ကျွန်တော်တို့ လမ်းပေါ်မှာ တင်ထားတဲ့ဘောလုံးကို တစ်ယောက်ယောက်က ကန်ထဲကို ကန်ထည့် လိုက်တယ်..။ ကျွန်တော်တို့ ဘယ်သူကန်လဲလို့ လိုက်ရှာတာ ဘယ်သူမှ မတွေ့ဘူး..။ သူ့ဟာသူ ကျရအောင် လည်း ဘောလုံးထားတဲ့နေရာက မြေညီမှာ။ ပြီးတော့ ဘောလုံး ကျသွားတဲ့ နေရာက ကန်စိမ်းရဲ့ အလယ် တည့်တည့်။
သူငယ်ချင်းက ဘောလုံး ဆင်းယူဖို့ အင်္ကျီတွေ ချွတ်လိုက်တယ်..။ ကျွန်တော်က ရေမကူးတတ်ဘူး..။ ဒီကောင်က ရေကူးတော်တော်ကျွမ်းတယ်..။ အရင်ကလည်း ဒီကောင် ကူးနေကြဆိုတော့ ကျွန်တော်လည်း ဒီအတိုင်းပဲနေလိုက်တယ်.။ဒီကောင်ကန်စိမ်းလည်းရောက်ရောရုတ်တရက် ရေငုတ်သလို ပျောက်သွားတယ်..။ ကျွန်တော် ဒီကောင် ရေငုတ်တယ်ပဲ ထင်တာ…။ တော်တော်ကြာ ပေါ်မလာတော့မှ ကျွန်တော် ပြာပြီလေ..။
နီးစပ်ရာ လူကြီးတွေကို ပြေးခေါ်…၊ လူကြီးတွေ ရေငုပ်ရှာတော့ ဟိုးရေအောက်မှာ ကျောက်တုံးကို ကျစ်ကျစ်ပါအောင် ဖက်ပြီး အသက်မရှိတော့တဲ့ ဒီကောင့်ကိုပြန်တွေ့ရတယ်..။ လူကြီးတွေကလည်း အံ့သြနေ ကြတယ်..။ ဒီကောင် ရေကူးဒီလောက်တော်တာ လူတိုင်းသိတယ်..။ ပြီးတော့ ဒီလိုရေသေမှာ ဒီကောင် ဘာကို ဒီလောက် ကြောက်လန့်ပြီး ကျောက်တုံးကို မလွတ်ပဲ ဖက်ထားစရာ ဘာရှိလဲဆိုတာ သူမှပဲ သိနိုင်မှာ..။
သူငယ်ချင်း အသုဘကိစ္စတွေ လုပ်ကူရင်းနဲ့ ၁၀ ရက်လောက် ကျောင်းကနေ ခွင့်ယူလိုက်တယ်..။ ကိုယ့်မျက်စိ ရှေ့မှာတင် ဒီကောင့်အလောင်းကို မြင်ခဲ့ရတာဆိုတော့ စိတ်ကလည်း လုံးဝမကောင်းဘူး..။ ဒီလိုနဲ့ ကျောင်း ပြန်တက်တော့ အရာရာကိုမေ့နိုင်အောင် ကြိုးစားပြီး အကောင်းဆုံးနေနိုင်အောင်ပဲ ကြိုးစားခဲ့တယ်..။
တစ်ရက် ဘာကိုဘယ်လို စိတ်လေမိမှန်းမသိဘူး..။ ကျောင်းဆင်းလို့ အိမ်လည်း မပြန်ချင်၊ ကျူရှင်လည်း မသွားချင်တာနဲ့ ကျူရှင်ပြေးပြီး ဘောလုံးကန်နေလိုက်တယ်..။ ကန်ကောင်းကောင်းနဲ့ ကန်လိုက်တာ ဘောလုံး မမြင်ရအောင် မိုးချုပ်မှ ပွဲရပ်ပြီး အိမ်ပြန်ကြတယ်..။ ကျွန်တော့်အိမ်ပြန်မယ့်လမ်းက အဲ့ဒီကန်ကြီ ဘေးက လမ်းကနေ သွားရမယ်..။
ဒီလောက် မိုးချုပ်ကြီး တစ်ယောက်တည်း ဒီကန်ကြီးဘေးကနေ တစ်ခါမှ မဖြတ်ဘူးတော့ လန့်တာပေါ့..။ ဒါပေမယ့်မပြန်လို့မှမဖြစ်တာ..။ ကျောင်းစောင့်က ကျောင်းတံခါးတောင် သော့ခတ်ပြီးနေလို့ ပြန်တောင်းပန် ပြီး မနည်းဖွင့်ခိုင်းရတယ်..။ ကျောင်းပြင်ရောက်လို့ ကန်ကြီးကို မြင်ရတာ မလှုပ်မလျက်နဲ့ တစ္ဆေတစ်ကောင် ပြားပြားကြီး အိပ်နေသလိုမျိုးပဲ…။
ကိုယ့်ကိုယ်ကို အားမွေးရင်း လျှောက်လာလိုက်တာ ကန်လယ်လောက်လဲရောက်ရော.. တစ်ဗွမ်းဗွမ်းနဲ့ ရေထဲကို ခုန်ချနေတဲ့ အသံတွေ ကြားရတယ်..။ သြော်.. ဘောလုံးအတူတူ ကန်ခဲ့တဲ့ကောင်တွေ ထင်တယ်..။ မိုးချုပ်နေပြီ ဒီကောင်တွေတော့ ဆရာ/ဆရာမတွေ တွေ့ရင် ဆူခံရအုံးမယ်လို့ တွေးနေမိတယ်…။ ဟုတ်တယ်..။ ကောင်လေးတွေ အများကြီးပဲ..။ လမ်းဘေး ကန်ဘောင်ပေါ်က ရေကန်ထဲကို ခုန်ခုန်ချနေကြတာ..။ ကျွန်တော် အဖော်ရပြီးဆိုပြီး အားတက်လာတယ်..။
ကျွန်တော် သူတို့အနီးရောက်မှ သိလာတာက သူတို့မျက်နှာတွေက ဖြူဖတ်ဖြူရော်တွေ..၊ ပြီးတော့ အရေပြား တွေက တွန့်လိမ်နေတယ်..။ သူတို့ တစ်ကိုယ်လုံး ရေတွေ ရွှဲရွှဲစိုနေပြီး နှုတ်ခမ်းတွေက ပြာပြီး အနက်ဖက်ကိုပါ တမ်းနေပြီ..။ တစ်ချို့တွေက ဗိုက်ကြီးတွေပူပြီးတော့ မျက်နှာတွေ မပြုံး မရီ အရုပ်တွေလိုပဲ တာဝန်အရ ရေထဲ ခုန်ချနေတဲ့ပုံစံ။ တောင့်တောင့်ကြီးတွေ..။
ကျွန်တော် ဇောချွေးတွေ ပြန်လာပြီး သူတို့ကိုပဲ ကျော်သွားရမလား..၊ ကျောင်းထဲ ပြန်ပြေးဝင်ရမလား စဉ်းစားနေ တုန်း.. ခုန်ချနေတဲ့ သူတွေထဲက တစ်ယောက် ကျွန်တော့်ဖက်ကို လှည့်လာတယ်..။ သူ့မျက်နှာ ကို မြင်လိုက်ရတော့ ကျွန်တော့် တစ်ကိုယ်လုံး တောင့်တင်းသွားပြီး ကြက်သီးတွေ တဖြန်းဖြန်းထသွားတယ်..။ တလောကမှ ဘောလုံးဆင်းယူရင်း ရေနစ်သွားတဲ့ ကျွန်တော့်သူ ငယ်ချင်း..။ သေချာ ပြန်ကြည့်တယ်..။ ဟုတ်တယ်။ မမှားဘူး..။ ဒီကောင်မှ ဒီကောင် အစစ်။
ဒီကောင် ရေကန်ထဲကို မခုန်ချပဲ ကျွန်တော့်ဘက် ကို လျှောက်လာတယ်..။ လမ်းလျှောက်ပုံက စက်ရုပ် တစ်ရုပ်လိုပဲ..။ ကျွန်တော် ဘာမှ မစဉ်းစားတော့ပဲ အော်ပြီး ကျောင်းဘက်ကို လှည့်ပြေးတယ်..။ ကျောင်းက ၀န်းတံခါးပိတ် ထားပြီးပြီ။ ကျောင်းစောင့်ကြီးကို အော်ခေါ်တယ်..။ ဘာသံမကြား..။ အဲ့ဒီအချိန်မှာ ကျွန်တော့် သူငယ်ချင်းက ကျွန်တော့်ဘက်ကို လျှောက်လာနေတုန်းပါပဲ..။ ကျွန်တော် ရသမျှ ဘုရားစာတွေ အကုန်ရွတ်ပါတယ်..။ ကျွန်တော်နဲ့ သူ ၁၀ ပေလောက်အကွာမှာ ကျွန်တော် ဘာမှ မစဉ်းစားတော့ပဲ သံဆူးကြိုးတွေ ရှိတဲ့ အုတ်နံရံ ကို တွယ်တက်ပြီး ကျောင်းဝန်းထဲကို ကျော်ဝင်လိုက်ပါတယ်..။ တစ်ကိုယ်လုံး ဒဏ်ရာတွေကြီးပါပဲ..။ ပြီးမှ ကျောင်းစောင့်အိမ်ကိုသွားပြီး အဖြစ်အပျက်ပြောပြတော့ ကျောင်းစောင့်ကြီးက အိမ်ကိုဖုန်းဆက်ပေးပြီး အိမ်က လူတွေက ကျွန်တော့်ကို ကျောင်းမှာ လာကြိုကြပါတယ်…။
ဒီအဖြစ်အပျက်ကို ယုံတဲ့သူလဲ ရှိသလို မယုံတဲ့လူလဲ ရှိပါတယ်..။ လုပ်ကြံပြောတယ်လို့ လာပြောတဲ့သူတိုင်းကို ကျွန်တော် အုတ်နံရံကျော်လို့ ရရှိခဲ့တဲ့ ဒဏ်ရာတွေက လုပ်ကြံဇာတ်လမ်း မဟုတ်ဘူးလို့ သက်သေခံပါတယ်..။
နောက်ပိုင်း ကျောင်းဝင်ပေါက်ကို ရေကန်ဖက်ကနေ အရှေ့ဘက်ကိုနေရာပြောင်းပြီး အဲ့ဒီ ၀င်ပေါက်ကိုတော့ အပြီးပိတ်လိုက်ပါတယ်..။ ဒါပေမယ့်လည်း ကျွန်တော့်လို ညဘက် ကလေးတွေ ရေကန်ထဲ ခုန်ခုန်ချနေကြတယ် ဆိုကိုတော့ အကြွင်းမဲ့ ယုံကြည်ပေးသူ တစ်ယောက်တော့ ရှိပါတယ်..။ သူကတော့ ကျွန်တော်တို့ကျောင်းရဲ့ ကျောင်းစောင့်ကြီးပေါ့ဗျာ…။
လားရှိုးမှာ နေတာကြာရင် ကျွန်တော်ပြောတာ ဘယ်ကျောင်းလဲ သိကြမှာပါဗျာ..။ အခုတော့ အဲ့ဒီကန်ကြီး ကောသွားပြီလား ဆက်ရှိသေးလားတောင် မသေချာတော့ဘူး..။
စာရေးသူ Aung Htun Oo ရေးခဲ့ချိန် 5:49 PM2comments:
"မင်္ဂလာပါ..။ သူငယ်ချင်းမရှိလို့ ခင်ချင်လို့ပါ…"
သူမ ကျွန်တော့်ကို လာမိတ်ဆက်ခဲ့ပုံက ရိုးရိုးလေးပင်ဖြစ်သည်။ ဒီလိုနဲ့ ဟိုအကြောင်း ဒီအကြောင်း ရောက်တတ်ရာရာပြောရင်း ကျွန်တော်တို့ online ပေါ်က သူငယ်ချင်းဖြစ်ခဲ့ကြသည်။ အမှန်တိုင်း ၀န်ခံရလျှင် ကျွန်တော်သည် စာရိုက်ပြီး chatting လုပ်ရတာကို ပျင်းရိသော လူအမျိုးအစားထဲတွင် ပါဝင်သည်။ ပြောတိုင်းလိုင်း အပေါက်အလမ်းက တည့်ချင်မှတည့်သည်။ လူဘုကလန့်လို့လည်း တစ်ချို့က ခေါ်ကြသည်။ ဒါကြောင့် ကျွန်တော့်တွင်း online သူငယ်ချင်းလည်း များများစားစားမရှိခဲ့..။
ဒါပေမယ့် သူမနဲ့ chatting လုပ်ရင်း သတိထားမိလာတာက ကျွန်တော် chatting လုပ်ရတာကို ပျော်နေမိသည်။ သူမက ဟာသဥာဏ်ရွှင်သည်။ လူတစ်ဖက်သား မခံချင်အောင်လည်း စတတ်သည်။ သူစလို့ ကျွန်တော် စိတ်ဆိုးနေပြီဆိုရင် သူမမှာ ပျော်လို့မဆုံး..။ ပြီးလျှင် စကားတတ်သော သူမက ကျွန်တော်စိတ်ဆိုးပြေအောင် ရီစရာတွေ ပြန်ပြောပြနေတတ်သည်။ ဒါတွေသည်ကပဲ ကျွန်တော့်ကို သူမနဲ့ chatting လုပ်ရတာ ပျော်နေစေသည်လား မပြောတတ်။
ကျွန်တော် နာရီကို တစ်ချက်ကြည့်လိုက်သည်။ အချိန်က ည ၁၁း၄၅..။ နောက် ၁၅ မိနစ်ဆိုရင် ၁၂း၀၀ နာရီထိုးပြီ..။ ၁၂း၀၀ နာရီဆိုရင် chatbox မှာ သူမရဲ့ account မီးစိမ်းလေးလင်းလာလိမ့်မည်။ ကြိုတွေးထားသည့် အတိုင်းပင် ၁၂း၀၀ နာရီထိုးသည်နှင့်….
"ဟိုင်း..ညီမ..." ….. ဒီလိုနဲ့ပဲ ကျွန်တော်တို့အကြား သံဃောဇဉ်ဟူသော ကြိုးသည် လေလှိုင်းထဲမှတစ်ဆင့် အသံမကြား ရုပ်မမြင်ရသော စာလုံးတွေနဲ့ ဖြစ်တည်လာခဲ့ရလေပြီ..။
စာရေးသူ Aung Htun Oo ရေးခဲ့ချိန် 10:05 AM6comments:
သူ…. သူဟာ ဘယ်လောက်မောမော အိမ်ပြန်လာလို့ သားသမီးတွေ မျက်နှာမြင်ရင် မောပန်းသမျှ ပြေသွားတယ်တဲ့….. ဒါပေမယ့် အိမ်ပြန်လာတဲ့ သူ့မျက်နှာဟာ ကျွန်တော့် အမြင်မှာ သူဟာ ပျော်ရွှင်နေပုံ မပေါက်ခဲ့ဘူး..။
သူ…. သူဟာ ကျွန်တော့်ကို သူ့လိုမျိုး ပညာမတတ်ပဲ မောမောပန်းပန်းနဲ့ အလုပ်လုပ်ရမှာကို မဖြစ်ချင်ဆုံးပါတဲ့… ဒါပေမယ့် ကျွန်တော်ကတော့ သူက အားအားရှိ ကျွန်တော့်ကို ပင်ပန်းအောင် ရှာကြံ ခိုင်းနေတယ်လို့ပဲ ထင်ခဲ့မိတယ်..။
သူ…. သူဟာ ကျွန်တော် မလိမ်မာလို့ ရိုက်နှက်ဆုံးမပြီးရင် ကျွန်တော် မသိအောင် အမေ့ကို ဆေးလူးခိုင်းပြီး သက်သာသလား စိုးရိမ်စွာ မေးတတ်ပါသတဲ့… ဒါပေမယ့် ကျွန်တော်ကတော့ သူ့ကို ရက်စက်တတ်သူလို့ပဲ ထင်ခဲ့တယ်..။
သူ… ထမင်းစားပွဲမှာ ကျွန်တော်မပါရင် မျက်နှာမကောင်းပဲ အစောကြီး ထ ထ သွားပြီး ကျွန်တော် ထမင်းစားပြီးပြီလားဆိုပြီး တမေးတည်း မေးနေတတ်တယ်တဲ့....။ ဒါပေမယ့် ကျွန်တော်ကတော့ သူ ဟင်းမကောင်းလို့ ဆက် မစားတာလို့ပဲ ထင်ခဲ့တယ်..။
သူ…. သူ့ကျန်းမာရေးအတွက် ၀ယ်ရမယ့် ဆေးကို မ၀ယ်ပဲ ကျွန်တော့် အတွက် ကျောင်းသုံး ပစ္စည်းတွေကို ၀ယ်ပေးခဲ့တယ်..။ ကျွန်တော်ကတော့ ကိုယ်လိုချင်တဲ့ အကောင်းစားပစ္စည်းမရလို့ သူ့ကို ကပ်စေးနှဲကြီးလို့ ထင်ခဲ့တယ်..။
သူ…. ကျွန်တော် စာမေးပွဲအောင်တော့ … "ငါ့သား ဘယ်လောက်တော်လဲ ကြည့်စမ်း..၊ ဒါမှ ငါနဲ့ တူတဲ့ ဖအေတူသား.. ငါ့သားကွ.." ဆိုပြီး အမေ့ကို ကြွားပြောပါသတဲ့…..။ ကျွန်တော်ကတော့ ကျွန်တော် စာမေးပွဲအောင်တာတောင် ပျော်ရွှင်ပုံမပေါ်တဲ့ သူ့ကိုကြည့်ပြီး စိတ်ပျက်ခဲ့တယ်..။
သူ… ကျွန်တော် အလုပ်ကရတဲ့ ပထမဆုံးလခကို ကန်တော့ တော့ မျက်ရည်ကျပြီး သူဟာ ငိုခဲ့ပါသတဲ့..။ ကျွန်တော်ကတော့ ကန်တော့ အပြီးမှာ ဆုတောင် မပေးပဲ မျက်နှာလွှဲသွားတဲ့သူ့ကို မာနကြီးသူကြီးလို့ နာမည် တပ်ခဲ့မိပါတယ်….။
သူ…. ကျန်းမာရေး မကောင်းဖြစ်ပြီး ခံစားနေရတဲ့ ဝေဒနာတွေကို အံကြိတ်ပြီး အပူရုပ်ကို ဟန်လုပ် ပြုံးပြနေခဲ့တဲ့သူ..၊ ကျွန်တော်ကတော့ အပေါ်ယံကိုကြည့် အရာရာကို အဆင်ပြေလှပြီလို့ပဲ တွေးထားခဲ့မိတယ်…။
သူ… သူ့ရဲ့ နောက်ဆုံးအချိန်လို့ သိလိုက်နေချိန်မှာ… သူ့ မာန် မာနတွေ ခ၀ါချ..၊ နွေးထွေးတဲ့ ဖြူလျော့တဲ့ လက်နှစ်ဖက်နဲ့ ..၊ ကျွန်တော့်လက်ကို ကိုင်ပြီး ဝေဒနာတွေကို အံတု အားတင်းပြီး ပြောလိုက်တဲ့ စကားတစ်ခွန်းက "သားကို ဖေဖေ သိပ်ချစ်ပါတယ်…" တဲ့….။ ကျွန်တော် ကြားချင်လှတဲ့ စကားကို ကျွန်တော် ကြားရချိန်မှာ ကျွန်တော်ဟာ ပျော်နေတဲ့ သူတစ်ယောက် မဖြစ်ခဲ့ရဘူး..။
သူ…သူ…သူ… သူဟာ စကား အများကြီး မပြောတတ်ဘူး..။ ပြောလိုက်တိုင်းလည်း ချစ်ကြောင်း ပျော်ရွှင်ကြောင်းတွေ မပါပဲ ဆုံးမစကားတွေပဲ ဖြစ်နေတယ်..။ ဒါပေမယ့်……. သူ သားသမီး အပေါ် ချစ်တဲ့ ရင်ထဲက အချစ်ကတော့ ကိုးလလွယ် ဆယ်လမွေးခဲ့တဲ့ အမေတွေရဲ့ အချစ်ထက် တစ်ပြားသားမှ မလျော့ပါဘူးဆိုတာကို သင်သိလိုက်ရတဲ့အချိန်ဟာ နောက်မကျပါစေနဲ့လို့ ဆုတောင်းလိုက်ပါရစေ…။
စာရေးသူ Aung Htun Oo ရေးခဲ့ချိန် 9:27 AM 1 comment:
စာရေးသူ Aung Htun Oo ရေးခဲ့ချိန် 6:41 AM No comments:
စာရေးသူ Aung Htun Oo ရေးခဲ့ချိန် 5:39 PM6comments:
စာရေးသူ Aung Htun Oo ရေးခဲ့ချိန် 8:23 PM No comments:
စာရေးသူ Aung Htun Oo ရေးခဲ့ချိန် 5:14 PM No comments:
က မ္ဘောဒီးယားနိုင် ငံ မှာ ဖြစ်ပွားတဲ့ အမှုပါ။ ဖခင် နဲ့ မိခင် တို့နှစ် ဦးပေါင်းပြီး
မိမိ ရင်သွေး ကိုခုတ်ပိုင်း ပြီး ဟင်းချက် ဖို့ ပြင် ဆင် ထားတာပါ သူ တို့အသိတရားပြန် ဝင် တဲ့အချိန် မှာ မိမိသားကို သတ်မိပြီမို့အဖမ်း ခံ ခဲ့ ပါ တယ်
စိတ် ကြွ ဆေး သုံးစွဲ တာ တွေ့ ရှိ တာ ကြောင့် ယင်းမိဘ နှစ် ဦးကို
တစ်သက် တစ်ကျွန်း ချမှတ် လိုက်ပါတယ်။ မူးယစ်ဆေးဝါးနောက် ဆက်တွဲ ပြဿနာကို
အများသိ အောင် share ပေးပါ ဦး
မျက်လှည့်် နှင့် ထူးဆန်းဖွယ် ရာ' group မှ ဖော်ပြသည်။
စာရေးသူ Aung Htun Oo ရေးခဲ့ချိန် 5:11 PM4comments:
၈ တန်းလောက်တုန်းက ကျောင်းကို ကျောင်းသားသစ်တစ်ယောက်ရောက်လာတယ်..။ နာမည်က ကျော်ကျော်တဲ့..။ ရုပ်ရည် အပြောအဆိုကတော့ ကျွန်တော်တို့အတွက်တော့ သူလိုကိုယ်လိုပါပဲ..။ ခက်တာက အခန်းထဲက မိန်းကလေးတွေ..။ တစ်ကျော်တည်း ကျော်နေတော့တာ..။ မုန့်စားဆင်းချိန် လည်း သူ့အတွက် မုန့်ဝယ်ပေးလာရတာနဲ့ ထမင်း၊ ဟင်းပိုထည့် ပေးလာရတာနဲ့..ဆိုတော့ ကျွန်တော်တို့အဖွဲ့က နည်းနည်းတော့ အမြင်ကပ်လာတော့ပေါ့နော်..။ အဲ့ဒါ တစ်ရက်လည်းကျရော.. သတင်းတစ်ခုက ထွက်လာတယ်.. "ကျော်ကျော့်မှာ ပီယဆေးရှိတယ်တဲ့.."
နောက်နေ့ မုန့်စားဆင်းတော့ ကျွန်တော်နဲ့ အခြား သူငယ်ချင်းနှစ်ယောက် မုန့်နဲ့ အချိုရည် ၀ယ် လိုက်တယ်..။ ပြီးတော့ ကျော်ကျော့်စားပွဲကို သွားပြီး မုန့်နဲ့ အချိုရည်ကိုတင်လိုက်တယ်..။ ပြီးတော့ မျက်နှာကို အချိုဆုံးလုပ်ပြီး "သူငယ်ချင်းကျော်ကျော်.. စားပါအုံး… မင်းအတွက် ၀ယ်လာတာကွ.."
ဒီကောင်က ကျွန်တော်တို့ကို မယုံသလိုကြည့်တယ်..။ ပြီးတော့ သူ့အိပ်ကပ်ထဲကို သူပြန်ကြည့်တယ်..။ ပြီးတော့ ပါးစပ်ကနေ "ဒုတ်ခပဲ..။ ဒီဆေးက ယောက်ျားလေးတွေပါ အစွမ်းပြတာလားဟ…" ဆိုပြီး တိုးတိုးလေး ရေရွတ်သံကြားလိုက်ရတယ်..။
"ဟာ.. ဟရောင်.. တစ်မျိုး မထင်ပါနဲ့ကွာ.. ငါတို့က ရိုးရိုးသားသားကျွေးတာပါ.. တစ်ခုပဲ မင်းဆောင်ထားတဲ့ ပီယဆေးအကြောင်းသိချင်တယ်..။ မပြောပြရင်တော့ ငါတို့ အတန်းပိုင်ဆရာမနဲ့ တိုင်ရလိမ့်မယ်…"
"တိုင်တော့ မတိုင်ပါနဲ့ကွာ..။ ပြောပြမယ်.. ။ ကတိတစ်ခုတော့ပေး.. မင်းတို့ သုံးယောက်ကလွဲပြီး ဘယ်သူမှ မသိစေနဲ့.."
"ဒီလိုကွ… ဒီပီယဆေးက လူသေကောင်ဆီက ယူထားရတာ.. စွမ်းတာ မစွမ်းတာတော့ မင်းတို့ အမြင်ပဲနော်.."
"အမငီးးးး. လူသေကောင်ဆီက…??? …ဘယ်လိုမျိုးလဲ ပြောပြပါလား.."
"အသက် ၄၀ ကျော်ပြီး လူပျိုစစ်စစ်ဆိုတဲ့ ဘယ်အလောင်းကမဆို ပီယဆေး ယူလို့ရတယ်..။ အဓိကက လူပျိုစစ်ရမယ်..။ အသက် ၄၀ကျော်မှ သေတဲ့အလောင်းဖြစ်ရမယ်..။ နောက်တစ်ချက်က အစိမ်းသေ မဖြစ်ရဘူး..။ ဆိုလိုတာက ရောဂါနဲ့ ဆုံးနဲ့သူဖြစ်ရမယ်.."
"မခက်ပါဘူး.၊ ၂လက်မအရှည်ရှိတဲ့ ဆံပင် အချောင်း ၃၀၊ ညာဘက် လက်မ လက်သည်းခွံ၊ ဘယ်ဘက် လက်သန်း လက်သည်းခွံ၊ ညာဘက် ခြေမ ခြေသည်းခွံ၊ ဘယ်ဘက် ခြေသန်း ခြေသည်းခွံ တွေက အိတ်သေးလေး တစ်အိတ်ထဲမှာ ရောထည့်ပြီး သွားလေရာမှာ ဆောင်သွား..။ ဒီမှာကြည့်.."
"ကဲ..ကဲ.. ယူစရာရှိတာ မြန်မြန်ယူ… သူများတွေ မြင်ရင် မကောင်းဘူး.."
"ဟာ.. ဦးလေး ယူပေးလေ.."
"ခွီး… ငါ့အလုပ်နဲ့ငါတောင် မအားဘူး..၊ ငါဟိုဘက်မှာ ရှိမယ်..။ ယူပြီးရင် ငါ့လာပြော.. ရော့ ဒီမှာ လက်သည်းညှပ်နဲ့ ကပ်ကြေး.."
"ကျွန်တော့်ကို လွတ်ပေးပါဗျာ… ကျွန်တော့်ကို မချုပ်ထားပါနဲ့…။ ကျွန်တော် သွားပါရစေ…"
"ကျွန်တော့်မှာ ဘာအပြစ်ရှိလို့လဲဗျာ..။ ကျွန်တော်သွားပါရစေ..။ ကျွန်တော့်ပစ္စည်းတွေကို ကျွန်တော့် အုတ်ဂူခြေရင်းမှာ ပြန်မြှပ်ပေးပါ..။ ကျွန်တော့်ကို သွားခွင့်ပေးပါဗျာ….အီး..ဟီး..ဟီး…"
ကျွန်တော်လည်း အရဲစွန့်ပြီး…"ကျွန်တော် မနက်ဖြန် ညနေ ပြန်ထားပေးပါ့မယ်..။ ကျွန်တော့်ကို ခွင့်လွှတ်ပါခင်ဗျာ.." လို့ ပြောပြီး နားပိတ်ပြီး ရသမျှ ဘုရားစာတွေ ရွတ်ဆိုနေလိုက်တယ်..။ ကျွန်တော် ဘယ်အချိန် အိပ်ပျော်သွားလဲဆိုတာတောင် မသိလိုက်ပါဘူး..။
စာရေးသူ Aung Htun Oo ရေးခဲ့ချိန် 6:53 AM No comments: